Xiaomi, Oppo na Vivo na-arụ ọrụ na ihe ngwọta nkekọrịta faịlụ | Gam akporosis
Xiaomi, Oppo na Vivo na-arụ ọrụ iwetara anyị azịza doro anya ịkọrọ faịlụ site na mbọhọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere onye ọrụ ibe gị ịchọrọ ịgafe x faịlụ ma ị mee ya n'ime ihe nke sekọnd ekele maka usoro ndị ọgbọ na ibe.
O doro anya na ọ mere gị na ịchọrọ nyefee onye otu vidiyo vidiyo na n'etiti njikọ Bluetooth, na ọ bụrụ na anyị ejiri ya na WiFi ma ọ bụ na batrị gị agwụla, n’ikpeazụ ị na-agwa ya, lee anya mgbe ọzọ n’ụlọ m ga-enye gị ya. Echiche nke ụlọ ọrụ atọ a bụ inye ngwọta ọsọ ọsọ iji zere oge a niile.
Usoro nke nyefe faịlụ na a ọsọ megabytes 20 kwa sekọnd ga-eji Bluetooth ijikọ ekwentị na njikọ WiFi iji nyefee ha. Ọ bụ Xiaomi bụ onye mebiri ozi ọma na post na WeChat site na akaụntụ MIUI ya.
Ọbụghị naanị na ha chọrọ ịnọnyere ndị nrụpụta atọ a na teknụzụ, mana ha nwere ọnụ ụzọ maka ndị ọzọ ịwụ elu n'ụgbọ okporo ígwè ma sonye na njikọta aka ya. Solutionsfọdụ yiri ngwọta bụ Apple nyefe na AirDrop, Google nwere ya faịlụ na gam akporo Q nke ga-ebuputa uzo ohuru a na-akpo Ndenye Egwu iji dochie gam akporo Beam.
The ịmata ihe banyere nke a technology nke atọ Chinese na-emepụta bụ na ha ga-mkpa ha onwe ha na protocol na-eji na ha igwe, ebe Ndenye Share o Fast Share jikọtara na Ọrụ Google Play, ya mere, anyị ga-ahụ ihe njedebe ikpeazụ ya bụ. Anyị na-ekwu maka eziokwu ahụ ọ bụrụhaala na ịnweghị nọmba ekwentị site na nke ọ bụla n'ime atọ, ọ gaghị enyere gị aka iji usoro ahụ.
Ọ ga-abụ maka mechara ọnwa a mgbe beta nke ihe ngwọta a sitere na Xiaomi, Vivo na Oppo pụtara nke mere na ị nwere ike ịkọrọ ndị enyi gị faịlụ ọsọ ọsọ ma ghara ịnọ ebe ahụ na-ele ekwentị gị ka ndị nzuzu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi, Oppo na Vivo na-arụkọ ọrụ ọnụ na ihe ngwọta ịkekọrịta faịlụ site na nso